विश्वको जनसंख्या बढेको र शहरहरू आकारमा बढ्दै जाँदा खानाको फोहोर बढ्दै गइरहेको छ। हरेक वर्ष लाखौं टन खाना फोहोरमा फ्याँकिन्छ। विश्वका फलफूलहरू, तरकारीहरू, अन्नहरू, मासुहरू र प्याक गरिएको खाद्यान्नहरूको करीव %०% प्रत्येक वर्ष फालिएका छन्। खाद्यान्न फोहोर सबै देशहरूमा एक ठूलो वातावरणीय समस्या भएको छ। ठूलो मात्रामा खाद्यान्न फोहोरले गम्भीर प्रदूषण निम्त्याउँछ, जसले हावा, पानी, माटो र जैवविविधतालाई हानी गर्दछ। एकातिर, फोहोर फोहोर एनेरोबिक रूपमा बिच्छेद हुन्छन् ग्रीनहाउस ग्यासहरू जस्तै मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड र अन्य हानिकारक उत्सर्जनको लागि। खाद्यान्न फोहोरले green.3 अरब टन ग्रीन हाउस ग्यासको बराबर उत्पादन गर्दछ। अर्कोतर्फ, फोहोर फोहोर ल्यान्डफिलमा फ्याँकिन्छ जुन जमिनको ठूलो क्षेत्र लिन्छ, ल्यान्डफिल ग्यास र अस्थायी धूलो उत्पादन गर्दछ। यदि ल्यान्डफिलको समयमा उत्पादित लेचेट राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छैन भने, यसले माध्यमिक प्रदूषण, माटो प्रदूषण र भूजल प्रदूषण निम्त्याउँछ।
भस्म र ल्यान्डफिलको महत्वपूर्ण बेफाइदाहरू छन्, र खाद्य अपशिष्टको थप प्रयोगले वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछ र नवीकरणीय स्रोतहरूको उपयोग बढाउँदछ।
कसरी खानाको फोहोर जैविक मलमा उत्पादन गरिन्छ।
फलफूल, तरकारीहरू, डेअरी उत्पादनहरू, अन्नफल, रोटी, कफी मैदान, ईगेलहरू, मासु र अखबारहरू सबै कम्पोज गर्न सकिन्छ। खाद्यान्न फोहोर एक अद्वितीय कम्पोस्टिंग एजेन्ट हो जुन जैविक पदार्थको प्रमुख स्रोत हो। खाद्यान्न फोहोरमा विभिन्न रासायनिक तत्त्वहरू, जस्तै स्टार्च, सेल्युलोज, प्रोटीन लिपिडहरू र अजैविक लवणहरू, र N, P, K, Ca, Mg, Fe, K केहि ट्रेस एलिमेन्टहरू समावेश छन्। खाद्यान्न फोहोरसँग राम्रो बायोडिग्रेडेबल छ, जुन 85%% सम्म पुग्न सक्छ। योसँग उच्च जैविक सामग्री, उच्च चिसो र प्रचुर मात्रामा पोषक तत्वहरू छन्, र उच्च रिसाइक्लिंग मूल्य छ। किनभने फोहोर फोहोरमा उच्च चिसो सामग्री र शारीरिक कम घनत्व संरचनाको विशेषताहरू छन्, तालिमको फोहोरलाई बल्किंग एजेन्टसँग मिसाउन महत्त्वपूर्ण छ, जसले अधिक नमी शोषण गर्दछ र मिक्स गर्न संरचना थप गर्दछ।
खाद्य फोहोरमा जैविक पदार्थको उच्च तह हुन्छ, १,% - २%%, फ्याट १ 17% - २ 24%, खनिज%% -%%, Ca 54 54%, odium% -%% को लागि सोडियम क्लोराइड, आदि
प्रक्रिया प्रविधि र खाद्य उपकरणलाई जैविक मलमा रूपान्तरणको लागि सम्बन्धित उपकरणहरू।
सबैलाई थाहा छ कि ल्यान्डफिल स्रोतहरूको कम उपयोगिता दरले वातावरणमा प्रदूषण निम्त्याउँछ। वर्तमानमा केही विकसित देशहरूले ध्वनियुक्त फोहोर उपचार प्रणाली स्थापना गरेका छन्। जर्मनीमा, उदाहरणका लागि, खाद्यान्न फोहोर मुख्यतया कम्पोस्टिंग र एनारोबिक किण्वनको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ, प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न फोहोरबाट million० लाख टन जैविक मल उत्पादन गर्दछ। बेलायतमा खाद्यान्नको फोहोर कम्पोस्ट गरेर, प्रत्येक वर्ष करिब २० मिलियन टन सीओ २ उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ। कम्पोस्टिंग अमेरिकाको लगभग%%% शहरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। कम्पोस्टिंगले विभिन्न प्रकारका वातावरणीय फाइदाहरू ल्याउन सक्छ, पानी प्रदूषण घटाउने सहित, र आर्थिक लाभहरू विचारणीय छन्।
पानी waste०%-% ०% को लागि रहेको फोहोर फोहोरको आधारभूत घटक हो जुन खाद्य फोहोर खराब गर्ने आधार हो। यसकारण, डिहाईड्रेसन भनेको फोहोरलाई जैविक मलमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
खाना फोहोर प्रि-ट्रीटमेन्ट उपकरण खानाको फोहोरको उपचारको पहिलो चरण हो। यसमा मुख्यतया डेवाटरिà प्रणाली - फिडि। प्रणाली - स्वचालित क्रमबद्ध प्रणाली - ठोस तरल विभाजक à तेल-पानी विभाजक à इन-वेप्ट कम्पोजर समावेश छ। आधारभूत प्रवाह निम्न चरणहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
१. फोहोर फोहोर पहिले प्रि-डिहाइड्रेट हुनुपर्दछ किनभने यसमा धेरै पानी हुन्छ।
२. फोहोर फोहोरबाट अजैविक फोहोर हटाउने, जस्तै धातु, काठ, प्लास्टिक, कागज, कपडा, इत्यादि क्रमबद्धिका माध्यमबाट।
Food. खाद्यान्न फोहोरलाई क्रूच, डिहाइड्रेशन र डिग्रेसिasing्गका लागि एक स्क्रू प्रकारको ठोस तरल विभाजकमा क्रमबद्ध र खुवाइन्छ।
S. निचोराइएको खाद्यान्न अवशेषहरू अधिक चिसो र विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवहरू हटाउन उच्च तापमानमा सुख्खा र बाँझी राखिन्छ। कम्पोस्ट प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने फोहोरको परिष्कृतता र ड्राईनेस, र खानाको फोहोरलाई बेल्ट कन्वेयर मार्फत सिधा इनभ्सेप कम्पोस्टरमा पठाउन सकिन्छ।
Food. खानाको फोहोरबाट हटाइएको पानी तेल र पानीको मिश्रण हो, एक तेल-पानी विभाजक द्वारा विभाजित। विभाजित तेल बायोडिजेल वा औद्योगिक तेल प्राप्त गर्न गहिरो प्रशोधन गरिन्छ।
सम्पूर्ण खाद्यान्न फोहोर हटाउने प्लान्टमा उच्च उत्पादन, सुरक्षित अपरेशन, कम लागत र छोटो उत्पादन चक्रका फाइदाहरू छन्।
किण्वन ट्या tank्क उच्च तापमान एरोबिक किण्वन प्रविधि प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा संलग्न ट्या tank्क हो जुन परम्परागत स्ट्याकिंग कम्पोस्टिing टेक्नोलोजीको सट्टामा आउँछ। ट्या high्कमा बन्द गरिएको उच्च तापक्रम र द्रुत कम्पोस्टिंग प्रक्रियाले उच्च-गुणस्तरको कम्पोस्ट उत्पादन गर्दछ, जुन अधिक सटीक र अधिक स्थिर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
इन-पोप्ट कम्पोष्टि ins इन्सुलेट गरिएको छ, र कम्पोष्टि duringको समयमा तापमान नियन्त्रण मुख्य कारक हो। सजिलै घननीय जैविक पदार्थको एक द्रुत ब्रेकडाउन माइक्रो-जीवहरूको लागि इष्टतम तापमान स्थिति कायम गरेर हासिल गरिन्छ। माइक्रो-जीवहरू र झारका बीउहरू निष्क्रिय पार्ने उच्च तापमान प्राप्त गर्न आवश्यक छ। किण्वन एक किक-सुरूवात हो जुन स्वाभाविक रूपमा खानाको फोहोरमा सूक्ष्म जीवहरू आउँछन्, उनीहरूले कम्पोस्ट सामग्रीहरू भाँच्दछन्, पौष्टिक तत्त्वहरू छुट्याउँदछ, तापक्रम increasing०-70० डिग्री सेल्सियससम्म बढाएर रोगजनक र झारका बीउहरू मार्न आवश्यक हुन्छ, र जैविक फोहोर प्रशोधनका लागि नियमहरू। इन-पोप्ट कम्पोष्टिको सब भन्दा छिटो विघटन हुने समय छ, जसले खाद्यान्नको फोहोरलाई कम्तीमा days दिनमै कम्पोस्ट गर्न सक्दछ। 4-7 दिन पछि, कम्पोस्ट डिस्चार्ज हुन्छ, जुन गन्ध रहित, सेनिटाइज, र जैविक सामग्रीमा धनी हुन्छ, र यसले पौष्टिक मूल्य संतुलित राख्छ।
कम्पोस्टरले उत्पादन गरेको यो गन्ध रहित, एसेप्टिक जैविक मलले वातावरण संरक्षणको लागि भरिने जग्गा मात्र बचत गर्दैन, तर केही आर्थिक लाभ पनि ल्याउँछ।
Gगोलाकार जैविक मलहरू मलको आपूर्ति रणनीति विश्व पक्ष मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहोस्। उपज जैविक मललाई सुधार गर्ने कुञ्जी उपयुक्त जैविक मल धान्न मेशीन छनौट गर्नु हो। ग्रान्युलेसन भनेको सामग्रीलाई साना कणहरूमा बनेको प्रक्रिया हो, यसले सामग्रीको प्राविधिक गुणहरू वृद्धि गर्दछ, केकिंग रोक्छ र प्रवाह गुणहरू बढाउँदछ, थोरै मात्राको प्रयोग सम्भव गर्दछ, लोडिing, यातायात, आदिलाई सजिलो बनाउँछ। सबै कच्चा पदार्थहरूलाई गोलाकार जैविक मलमा बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जैविक मल धान्न मेशीन को माध्यम बाट। सामग्री दानाको दर १००% सम्म पुग्न सक्छ, र जैविक सामग्री १००% सम्म उच्च हुन सक्छ।
ठुलो मात्रामा खेतीका लागि, बजारको प्रयोगका लागि उपयुक्त कण आकार आवश्यक छ। हाम्रो मेसिनले विभिन्न आकारका जैविक मलहरू उत्पादन गर्न सक्दछ, जस्तै 0.5.mm मिमी-१.mm मिमी, १.mm मिमी-mm मिमी, २ मिमी-mm मिमी।जैविक मलको ग्रेनुलेसन बहु-पोषक उर्वरक सिर्जना गर्न, थोक भण्डारण र प्याकेजि forको लागि अनुमति प्रदान गर्ने, साथै ह्यान्डलि and र अनुप्रयोगको सजिलो प्रदान गर्न खनिजहरूलाई मिश्रित गर्न केहि सबैभन्दा व्यावहारिक तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। दानायुक्त जैविक मलहरू प्रयोग गर्न बढी सजिलो हुन्छन्, ती अप्रिय गन्ध, झारका बीउहरू र रोगजनकाहरूबाट स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनीहरूको संरचना राम्ररी परिचित छ। जनावरको मलको तुलनामा, तिनीहरूसँग 3.3 गुणा बढी नाइट्रोजन (एन), times गुणा फास्फोरस (पी २ ओ)) र 8.२ गुणा बढी पोटेशियम (K2O) हुन्छ। दानायुक्त मलले ह्युमसको स्तर बढाउँदै माटोको व्यवहारिकतामा सुधार ल्याउँछ, धेरै माटो उत्पादकता सूचकहरू सुधार हुन्छन्: भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीवकीय माटो गुणहरू र आर्द्रता, हावा, तातो व्यवस्था, र बाली उत्पादन पनि।
Ry सुख्खा र चिसो।
रोटरी ड्रम सुकाउने र कूलि machine मेशीन जैविक मल उत्पादन लाइनमा अक्सर सँगै प्रयोग गरिन्छ। जैविक मलको पानी सामग्री हटाईन्छ, ग्रेन्युल्सको तापक्रम कम हुन्छ, बाँझ र डिओडरियसनको उद्देश्य प्राप्त गर्दै। दुईवटा चरणले ग्रान्युलहरू र सुधारिएको कणको शक्तिमा पोषकहरूको हानीलाई कम गर्न सक्छ।
Ieve Sieve र प्याकेज।
स्क्रिनिंग प्रक्रिया ती अयोग्य अनावश्यक खाद्यान्न मलहरूलाई छुट्याउने छ जुन द्वारा पूरा भयो रोटरी ड्रम स्क्रीनिंग मेशीन। अयोग्य ग्रेनुलर मल फेरि प्रशोधन गर्न पठाइन्छ, यस बीच योग्य जैविक मल द्वारा प्याकेज गरिनेछस्वचालित प्याकेजि machine मेशीन.
खाद्य अपशिष्ट जैविक मलबाट लाभ उठाउनुहोस्
खाद्यान्नको फोहोरलाई जैविक मलमा रूपान्तरण गर्नाले आर्थिक र वातावरणीय फाइदाहरू सिर्जना गर्न सक्दछ जसले जमिनको स्वास्थ्य सुधार गर्न र क्षरण कम गर्न र पानीको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। नवीकरणीय प्राकृतिक ग्यास र जैव ईंधनहरू पुनर्चक्रित खाद्य अपशिष्टबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले कम गर्न मद्दत गर्दछ हरितगृह ग्यास जीवाश्म ईन्धनहरूमा उत्सर्जन र निर्भरता।
जैविक मल माटोको लागि उत्तम पोषक हो। यो बोटबिरुवाको पोषणको राम्रो स्रोत हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम र माइक्रोन्यूट्रिएन्ट सहित, जो बोटको वृद्धिको लागि आवश्यक छ। यसले केहि बोट बिरुवा किरा र रोगहरूलाई कम गर्न सक्दैन, तर विभिन्न प्रकारका फgic्गीसाइड र रसायनहरूको आवश्यकतालाई पनि कम गर्दछ।उच्च-गुणवत्ता वाले जैविक मलहरू कृषि, स्थानीय फार्महरू र सार्वजनिक ठाउँहरूमा पुष्प प्रर्दशन सहित क्षेत्रको विस्तृत श्रृंखलामा प्रयोग हुनेछ, जसले उत्पादकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पनि दिन्छ।